Metrology ၏ယူနန် Institute မှ နှစ်စဉ်အနေ... 09-26
Metrology ၏ယူနန် Institute မှအောင်မြင်စ... 09-26
Metrology Dominant ပြည့်စုံ၏ယူနန် Insti... 09-21
Metrology ၏ယူနန် Institute မှတက်ကြွစွာပါ... 09-12
Metrology ၏ယူနန် Institute မှသုတေသနသွားရ... 09-07
Metrology ၏ယူနန် Institute မှပါဝင်ခဲ့ “... 09-07
AQSIQ JJG1123-2016 အကြောင... 03-29
လွှတ်ပေးရန် JJG1122-2015 ... 01-27
နှင့်အခြား 16 အမျိုးသားရေ... 01-27
လွှတ်ပေးရန် JJG1114-2015 ... 07-03
လွှတ်ပေးရန် JJG1112-2015 ... 04-23
လွှတ်ပေးရန် JJG1107-2015 ... 04-23
Authorized မူပိုင်ခွင့် 05-15
YIMT လက်ရှိစမ်းသပ်ရလဒ်ပြေ... 01-10
“Prepackaged ကုန်ပစ္စည်းမ... 06-09
“တူရိယာ directory ကိုတိုင... 06-09
“ဥပဒေရေးရာ metrology အဖွဲ... 06-09
YIMT စမ်းသပ်ရပ်ဆိုင်းမှုအသိပေးစာ taximeter စိစစ်အတည်ပြုအလုပ်အပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်
လူသိရှင်ကြား၏ YIMT စမ်းသပ် 2015 နောက်ဆုံးအကောင့်ဦးစီးဌာန
“ခွင့်မရညျအသှေးစစ်ဆေးရေးကြေးခုနစျက“ ၏ထုတ်ပေးရေးအပေါ် AQSIQ သတိပြုပါ
ဖောက်သည် YIMT စမ်းသပ်ဆိုက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုသိကောင်းစရာများ
Thermal Metrology ဘို့ Institute မှလက်ရှိအပူချိန်, ဖိအား, မြင်ကွင်းတစ်ခုသုံးဓါတ်ခွဲခန်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့်တိုင်းတာခြင်းတန်ဖိုးကိုလွှဲပြောင်းအလုပ်အဖြစ်အပူချိန် (ဓါတ်ရောင်ခြည်တိုင်းတာခြင်း, အဆက်အသွယ်တိုင်းတာခြင်း), ဖိအား, လေတိုက်နှုန်းနဲ့လေဟာနယ်ဒေသများရှိ, အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဤဒေသများရှိတညျဆောကျအတိုင်းတာခြင်းစံအခြေစိုက်သည်ကယ်တင်တော်, ပြည်နယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုသေချာစေရန်ငွေလွှဲထုတ်သယ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည် , တိုင်းတာပြင်းအားစုစည်းဖိအား, လေဟာနယ်, လေတိုက်နှုန်းနဲ့တိကျမှန်ကန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၏ယူနစ်။ ပုဂ္ဂိုလ်များလေ့ကျင့်ရေး, တိုင်းပြည်များ၏ဥပဒေပြုဘို့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် Thermal Metrology အာရုံစိုက်ဘို့ Institute မှ, တည်ဆဲန်ထမ်းလေးအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလေးအင်ဂျင်နီယာများ, နည်းပညာရှင်, လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်လူနှစ်ဦးအပါအဝင်လူ 19, ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ လောလောဆယ်တစ်ဦးကိုကိုးကားတည်ထောင်ရန်လုပ်ဆောင်နေပလက်တီနမ်ခုခံသာမိုမီတာ, စံပလက်တီနမ်-Rhodium ဆိုလိုသည်...
Metrology ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနအင်စတီကျုအဓိကအားဖြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေး, ဆေးဝါးဓာတုပစ္စည်းများ, နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်တိကျမှုနှင့်ကိုက်ညီပြည်နယ်ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုင်းတာခြင်းတန်ဖိုးများကိုသေချာစေရန်ယူနန်ပြည်နယ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ကိရိယာများကိုစိစစ်အတည်ပြု / စံကိုက်ညှိရာတွင်ပါဝင်နေသည် stoichiometric အခြေခံပညာန်ဆောင်မှု။ ဓာတုလက်အောက်တွင် optical, သုံးသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူရိယာစံကိုက်ညှိဓာတ်ခွဲခန်း။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းလေးခုသခင်၏ဘွဲ့, ကောလိပ်သို့မဟုတ်မြင့်မားကိုးလူများ, သုံးအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ, အင်ဂျင်နီယာများကိုးခေါင်းစဉ်များအပါအဝင် 14 တက်ကြွစွာန်ထမ်း, ရှိပါတယ်。...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ Institute မှတစ်ဦးဆေးကုသမှုတိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာ, optical တူရိယာ, metrology, စံကိုက်ညှိ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဌာန၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘွဲ့ရ2အပါအဝင် 10 Full-service ကိုအလုပျသမားကျော် 8 ကောလိပ်ပညာရေး, အကြီးတန်းခေါင်းစဉ်, အင်ဂျင်နီယာများ, တန်းလေး, တန်းလေး Co-လုပ်သားများရှိသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ Institute မှလက်ရှိ Datrend စနစ်များကနေဒါရဲ့ Multi-parameter ကိုမော်နီတာ, နှလုံးအကူစက်ကိုစောင့်ကြည့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြွတ်စုပ်စက် / ပြုတ်ရည်စုပ်စက်ရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး, ဆှီဒငျ RTI ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ X-ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ထောက်လှမ်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူတိုင်းတာခြင်း 16 အများပြည်သူစံချိန်စံညွှန်းများတည်ထောင်ရန်တိုင်းတာသည် ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကနေဒါ IMT ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိရိယာ / မေ့ဆေးစက်အရည်အသွေးအ detector...
တိုင်းတာခြင်းနှင့် Metrology ၏စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန Institute သုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခန်းများ, အခန်း၏အမည်ရအလျား, အခန်းအရည်အသွေး, အင်ဂျင်နီယာမီတာအခန်းထဲကထူထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်၏ပြောင်းရွှေ့ကြေးအဖြစ်ဒေသများရှိတိုင်းတာခြင်းသိပ္ပံနှင့်စက်ပြင်တိုင်းတာခြင်းတန်ဖိုးများ (အရည်အသွေး, တိုင်း, ဆင်းရဲဒုက္ခ, torque, တုန်ခါမှု, အမြန်နှုန်းထရာဆောင်း), အလျား၏ပြည်နယ်-ကျယ်ပြန့်တိုင်းတာခြင်းများအတွက်အဓိကအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်။ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 5, 8 အင်ဂျင်နီယာများ, လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်4အပါအဝင်လက်ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များ 18, ။ တိုင်းတာခြင်းနှင့် Metrology ၏စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန Institute ယူနန်တည်ဆောက် 42 အများပြည်သူစံ, 23 အမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများ, 19 ပြည်နယ်စံချိန်စံညွှန်းများရှိပါတယ်။ Form ကို Talysurf တူရိယာတိုင်းကိုငါ့အခန်းထဲကအရှည် / မျက်နှာပြင်မျးတမျးပုံဖော်，...
သတင်းအချက်အလက်နှင့် Metrology ၏လျှပ်စစ် Institute မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံလျှပ်စစ်သံလိုက်, အီလက်ထရွန်းနစ်တိုင်းတာခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း / စမ်းသပ်မှုနည်းပညာရှင်ထားကြ၏။ "ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရအထူးထောက်ပံ့ကြေး" နှင့် "ယူနန်ပြည်နယ်, ထူးချွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကို," အသီးအသီး, ငါးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေအတွက်ပျော်မွေ့သောအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာသုံးယောက်ကလူ, ရှိရင်းစွဲ; ပညာတတ်လူငယ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ ဒါဟာ 0.01 AC အ (DC က) စံ Multi-function ကိုစားပွဲ, 0,001 စံ, datron1281, FLUKE8508 အခြားနိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့်စံကိရိယာ၏လက်ရှိအချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ 25 လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, အချိန်နှင့်ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာစံအတန်းအစား (လူမှုရေး utility ကိုမီတာအပါအဝငျ "0.01 စံသုံး-အဆင့်အာဏာကိုစနစျ" ၏တည်ထောင်ခြင်း, အပါအဝင်...
flow တိုင်းတာခြင်းကြီးမားကျယ်ပြန့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူစသည်တို့ကိုတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာ, ဘက်စုံစားဝတ်နေရေးမီတာကုန်သွယ်မှုအခြေချ, လုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အရေးကြီးသောဒေသများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အောက်မှာ Metrology ၏ traffic Institute မှ: စီးဆင်းမှုခန်းအခန်းစွမ်းရည်, ရေနံတင်သင်္ဘောအခန်းနှင့်ယူနန်မီတာစမ်းသပ်ခြင်းအလယ်ဗဟို; နည်းပညာကျောရိုး၏တပြင်လုံးကို, နှစ်ခုမှအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာရှိပါတယ်, လေးအင်ဂျင်နီယာများ, သုံးဘွဲ့လွန်ခဲ့ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်တန်ဖိုးလွှဲပြောင်း၏ပြည်နယ်-ကျယ်ပြန့်အသွားအလာစွမ်းရည်တိုင်းတာခြင်းစံများအတွက်တာဝန်ရှိပညတ်တရားအတိုင်းနှင့်လောင်စာရေနံတင်သင်္ဘော, မသင်မနေရစိစစ်အတည်ပြုဆာစက်, ကားရေနံတင်သင်္ဘော, ဓာတုရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့်အန္တရာယ်များကိုရေမီတာနှင့်အခြားတိုင်းတာတူရိယာအဖြစ်အရည်, ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုထွက်သယ်ဆောင်ရန် အလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်မီတာ, အဆငျ့ gauge, ...
စိစစ်အတည်ပြုအလေးချိန်တိုင်းတာခြင်း၏လယ်ပြင်တွင်အများဆုံးအစဉ်အလာ, အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးနည်းပညာကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ3ဦးအပါအဝင်တည်ဆဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များ 15, ၏ Metrological စိစစ်အတည်ပြု။ အလေးချိန်ခန်းကုန်ပစ္စည်းများအခန်းထဲက၏ပမာဏကိုကြီးများနှင့်အသေးစားအလေးချိန်အခန်းထဲကပေးခဲ့ကြသည်။ တူရိယာစိစစ်အတည်ပြုစက်ကိရိယာနှင့်တိုင်းတာခြင်းစမ်းသပ်ထုတ်ပိုးကုန်စည်ပမာဏကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဓိကအလုပ်: prepackaged ကုန်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးရေးနှင့်အထူးကြီးကြပ်မှု၏အမျိုးသားရေးနှင့်ပြည်နယ်ပိုက်ကွန်ကိုအကြောင်းအရာကတိကဝတ်; အော်တိုစကေးအီလက်ထရောနစ်ထရပ်ကားစကေးမှာ dynamic လမ်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်သယ်ရန်, scale, ကြမ်းပြင်စကေးခုံတန်းလျားစကေးအမှုအကြေး, အီလက်ထရောနစ်အကြေး, စျေးနှုန်းကွန်ပျူတာစကေးဆွဲငင်အားမှ အလိုအလျှောက်အဆာတူရိယာ, စဉ်ဆက်မပြတ်စုစုပေါင်းအလိုအလျှောက်အလေးချိန်တူရိယာများနှင့်စမ်းသပ်မှု / စံကိုက်ညှိတဲ့အရေအတွက်; ကော်မရှင်၏ prepackaged ကုန်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးရေး၏ပိုက်ကွန်ကိုအကြောင်းအရာ ...
လူ 13, ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ, အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာသုံးယောက်ကလူအသွားအလာမီတာ Research Institute မှလက်ရှိန်ထမ်း။ ခှဲဝေ taximeter, ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းအခန်းထဲကနှစ်ခုအထူးပြုအခန်းများ။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်လက်ရှိတွင်ယူနန်စိစစ်အတည်ပြု / စံကိုက်ညှိအရေအတွက်လွှဲပြောင်းတာဝန်များကိုနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်၏အတိုင်းအတာအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာယူဆ, အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများ7အပါအဝင်အများပြည်သူစံချိန်စံညွှန်းများ 12 စုစုပေါင်းထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧရိယာတက္ကစီမီတာစမ်းသပ်မှု / စံကိုက်ညှိ, တပ်ဆင်ခြင်း, ညှိနှိုင်းမှုပြုပြင်, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် ဖြစ်. , မော်တော်ယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်မီတာပစ္စည်းကိရိယာများစိစစ်အတည်ပြု / စံကိုက်ညှိ, ညှိနှိုင်းမှုပြုပြင်, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး; မော်တော်ယာဉ်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ညစ်ညမ်းမှုထောက်လှမ်းပစ္စည်းကိရိယာများစမ်းသပ်မှု / စံကိုက်ညှိ, ညှိနှိုင်းမှုနှင့်ပြုပြင်; မီတာမြန်နှုန်းလမ်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု device ကိုစမ်းသပ် / စံကိုက်ညှိ, ညှိနှိုင်းမှုပြုပြင်; ရေဒါ ...
AQSIQ JJG1123-2016 အကြောင်း 10 နိုင်ငံများတွင် metrology စည်းမျဉ်းသတင်းလွှာပြန်လွတ်လာ 03-29
လွှတ်ပေးရန် JJG1122-2015 “သဘောကွိုင်မော်တော်ယာဉ်အမြန်နှုန်းစနစ်ဟာစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ“ နှင့် 25 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. AQSIQ ကြေညာချက် 01-27
နှင့်အခြား 16 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ “စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဝန်မီတာနည်းလမ်းအလေးချိန်) အီလက်ထရောနစ်ထရပ်ကားစကေး“ လွှတ်ပေးရန် JJG1118-2015 အကြောင်း AQSIQ ကြေညာခ... 01-27
လွှတ်ပေးရန် JJG1114-2015 “LNG အဆာစက်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ“ နှင့်အခြား 28 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. AQSIQ ကြေညာချက် 07-03
လွှတ်ပေးရန် JJG1112-2015 “relay ကို tester စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ“ နှင့်အခြား 12 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. AQSIQ ကြေညာချက် 04-23
လွှတ်ပေးရန် JJG1107-2015 “အော်တိုစံဖိအားမီးစက်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ“ နှင့်အခြား 12 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. AQSIQ ကြေညာချက် 04-23
လွှတ်ပေးရန် JJG1104-2015 “ပြောင်းလဲနေသောအလင်းပြအမှုန်အရွယ်အစား Analyzer စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ“ နှင့်အခြား 21 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. AQSIQ ကြေညာချ... 04-23
AQSIQ JJG1103-2014 “စံ torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းစမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ“ နှင့်အခြား 17 အမျိုးသားရေး metrology နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းသတင်းလွှာအပေါ်ပြန်လွတ်လာ 04-23
YIMT လက်ရှိစမ်းသပ်ရလဒ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ခွဲခြား 01-10
Authorized မူပိုင်ခွင့် 07-26
“Prepackaged ကုန်ပစ္စည်းများ metrological ကြီးကြပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲချဉ်းကပ်မှု“ 06-09
“တူရိယာ directory ကိုတိုင်းတာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအရသိရသည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ“ 06-09
“လူမှုတရားမျှတမှုမီတာလိုင်း (ဘူတာရုံ) ကြီးကြပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံ“ 06-09
“ဥပဒေရေးရာ metrology အဖွဲ့အစည်းများကြီးကြပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံ“ 06-09
မူပိုင်ခွင့် 2009 ခုနှစ် YIMT စမ်းသပ်။ All Rights Reserved